सरकारले मंगलबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसम्बन्धी नयाँ नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ । त्यसअघि अर्थशास्त्रीहरु यस वर्षको बजेट सरल र सामान्य किसिमको ल्याउनुपर्ने बताइरहेका छन् । पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्र खस्किएको, विदेशी सञ्चिति विनिमय दर कम हुँदै गएकोले देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई उकास्...
अबको बजेटमा सरकारले औद्योगिकीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ : विष्णुकुमार अग्रवाल (अन्तर्वार्ता)
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसम्बन्धी नयाँ नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ । तर पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख बन्दै गएको छ । वास्तवमा नेपालको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख मात्रै हो वा संकटग्रस्त बनिसक्यो ? यसबारे अर्थविद्हरुले विभिन्न तर्क गरिरहेका छन् । समस्यामा...
म्यानलाई देशभर फैलाउने र नयाँ अभ्यास लागू गर्ने मेरो योजना छ : मनीष झा (अन्तर्वार्ता)
मनीष झा राजनीति, सञ्चार, व्यवस्थापन लगायत विभिन्न क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्तित्व हुन् । उनी फ्याक्ट्स रिसर्च एन्ड एनालाइसिसका संस्थापक एवं सीईओ पनि हुन् । तथ्य र तथ्यांकको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको यो संस्था सन् २०१२ मा दर्ता भएको थियो । उनै झा हाल नेपाल व्यवस्थापन संघ (म्यान) को कार्यसमितिको सदस्यमा उम...
कोरोना महामारीले नेपालका धेरै क्षेत्रमा असर गर्यो, पर्यटन व्यवसाय पनि त्यसबाट टाढा रहन सकेन । अझैसम्म पनि नेपालका विभिन्न उद्योग व्यवसाय, पर्यटन व्यवसायहरु राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा नेपाल पर्यटन बोर्डले कोरोना महामारीपछि पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न पछिल्लो समय गरिरहेका कामहरु कस्...
स्थानीय तहले काम गर्न थालेको ५ वर्ष पुग्नै लागेको छ । यस अवधिमा स्थानीय तहले आ–आफ्नो क्षेत्रमा विभिन्न योजनाअनुसार काम गरिरहेको छ । सरकारले पुनः स्थानीय तहको निर्वाचन तोक्न लागेको छ । तर स्थानीय सरकारको ५ वर्षीय समयसीमा भित्र जनचाहना अनुरुपका काम भने हुन नसकेको धुलिखेल नगरपालिकाका मेयरसमेत रहे...
सुरुमै जाँच गरे पाठेघरको क्यान्सरको उपचार सम्भव : डा. रोशनी उलक (अन्तर्वार्ता)
फेब्रुअरी ४ अर्थात् आज (शुक्रबार) विश्व क्यान्सर दिवस । नेपालमा पनि विभिन्न सचेतना मुलक कार्यक्रहरु गरेर यस वर्ष ‘बढ्दैछ चुनौति क्यान्सरको, पहुँच बढाऔँ स्याहार’को भन्ने नारासहित क्यान्सर दिवस मनाइएको छ । पछिल्लो समय नेपालमा क्यान्सरका बिरामीहरु बढ्दै गएको अध्ययनले...
धराशायी भएका व्यापारीलाई सरकारले राहत प्याकेज दिनुपर्छ : नरेश कटुवाल (अन्तर्वार्ता)
पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा नागरिकको दैनिक जीवन सँगै देशको अर्थतन्त्र समेत बिग्रिँदै गएको अवस्था छ । अन्य उद्योग व्यवसाय समेत शिथिल बन्दै गएको अवस्था छ । अझ भन्ने हो भने कोरोना महामारीको कारण विगत दुई वर्षमा साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायी अझै माथि उठ्न सकेका छैन । कतिपय व्यवसायी...
डिजिटल रुपमा भुक्तानी सेवा दिँदै आएको निजी कम्पनी ‘इसेवा’ १३ वर्ष पूरा गरी १४औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । सन् २००९ मा बेटा भर्जन रिलिज गरी २०१० जनवरी २५ बाट सेवा सुरु गरेको इसेवाले यो अवधिमा नगदरहित अर्थतन्त्र निर्माणको बाटोमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सफल भएको छ । यो अवधिमा इसेवामा प्रत्...
कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा नागरिकको दैनिक जीवनसँगै देशको अर्थतन्त्र पनि बिग्रेको विश्लेषण हुन थालेको छ । सरकारको आधिकारिक धारणामा अर्थतन्त्र सबल नै छ भन्ने छ तर सरोकारवाला सबै खस्किँदै गएको भनेर धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन् । बैंक वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलताको चाप, खुद्रा बजार व्यवस...
पिसिआर गरेर ओमिक्रोन हो कि होइन थाहा पाउन सकिदैन, यसले ज्यान लिन्छ लापरवाही नगरौँ– डा. रक्षा गौतमसँग कोभिडवार्ता
मौसम परिवर्तनको समय शुरु भएसँगै धेरै मानिसहरुमा मौसमी रुघाखोकीको समस्या देखिन थालेको छ । यससँगै कोरोनाको पछिल्लो भेरिएण्ट ओमिक्रोनको संक्रमण पनि द्रुत गतिमा बढिरहेको छ। आम मानिसले आफुलाई भएको संक्रमण मौसमी रुघाखोकी होकी कोभिड संक्रमण छुट्ट्याउन सकिरहेका छैनन् । यसले अस्पतालमा दैनिक रुपमा रुघाख...